Michigan ဆေးခြောက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့နေ - Scott Roberts သည် Law Talks MMFLA နှင့် LARA
Michigan ဆေးခြောက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာရှေ့နေဖြစ်သူ Scott Roberts
​၂၀၁၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်တွင်ပြည်နယ်သည်အပန်းဖြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လျှောက်လွှာများကိုစတင်သောအခါမီချီဂန်ဆေးခြောက်စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်နေသည်။ မီချီဂန်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အရွယ်ရောက်သူအသုံးပြုမှုကိုမဲ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တရားဝင်ထားသော်လည်းပထမဆုံးအပန်းဖြေခြင်းလုပ်ငန်းသည် ၂၀၂၀ နွေ ဦး ရာသီအထိမဖွင့်နိုင်ဟုခန့်မှန်းထားသည် ဒီတစ်ပတ် Miggy နဲ့ Tom တို့ပါ ၀ င်ခဲ့တယ် ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေ မှဖြစ်သူ Robert Roberts သည် Scott Roberts သည်ဥပဒေ မီချီဂန်ရဲ့ဆေးခြောက်ရှုခင်းကိုဆွေးနွေးရန်။
ဤနေရာတွင်မီချီဂန်၌ဆေးခြောက်ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများသည်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ဥပဒေများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်အသိပေးမှုမရှိပဲပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ The MRA (မီချီဂန်စည်းမျဉ်းဥပဒေအေဂျင်စီ) ဆေးခြောက်ကိုထိန်းချုပ်တယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမှာအရာဝတ္ထုတွေအပေါ်သူတို့ရဲ့စာဖတ်ခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊ အဲဒါကိုသင်တက်တက်ကြွကြွမပါဝင်ဘူးဆိုရင်သင်မသိဘူး။ အင်တာနက်ပေါ်မှာအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်နှစ် (သို့) နှစ်နှစ်ကျော်ရင်ဒီဟာတွေဟာခေတ်နောက်ကျနေပြီ။ - Scott Roberts သည်
Scott Roberts သည်ဥပဒေကားအဘယ်နည်း။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမီချီဂန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမာရီဂွာနာအက်ဥပဒေ (MMMA)၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမာရီဂွာနာအဆောက်အအုံများလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးအက်ဥပဒေ (MMFLA)၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရေးနှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေရေးရာဌာန (LARA) စည်းမျဉ်းများ၊
တစ် ဦး ဆေးခြောက်ကဘာလဲ မိုက်ခရိုစီးပွားရေး?
ဆေးခြောက်စက်ရုံ ၁၅၀ အထိစိုက်ပျိုးရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များကိုစားသုံးသူများထံတိုက်ရိုက်ရောင်းချရန်နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခု
မိုက်ခရိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဆေးခြောက်နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခန်းကဏ္ from မှစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများအထိစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်
ဘာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် သူတို့၏ဆေးခြောက်အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်လိုအပ်သည်
ဆေးခြောက်ဥပဒေများသည်ရှုပ်ထွေးသည် သို့သော်သင်၏စားသုံးသူနှင့်နေထိုင်သူအနေဖြင့်သင်၏အခွင့်အရေးကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ သင်ဟာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်တစ် ဦး လား၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားသုံးသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်မှုအတွက်ရှေ့နေတစ်ယောက်ဆီကိုဆက်သွယ်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ အသက် ၂၁ နှစ်အထက်ရှိမီချီဂန်နေထိုင်သူများသည် -
သူတို့အိမ်တွင်ပန်းပွင့် ၁၀ အောင်စနှင့်သူတို့အိမ်အပြင်ဘက်တွင် ၂.၅ အောင်စရှိသည်
ဆေးခြောက် ၁၅ ဂရမ်အထိပါ ၀ င်သည်
၎င်းတို့၏နေအိမ်များရှိအပင် ၁၂ ခုအထိကြီးပွားပါ
Scott Roberts သည်ဥပဒေ
စတင်တည်ထောင်သူများနှင့်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆေးခြောက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးဝါးဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်မီချီဂန်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေကိုမကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ MMFLA လိုင်စင်၊ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှု၊ ဆေးခြောက်ရောင်းဝယ်မှုကိုတည်ထောင်လိုပါကမီချီဂန်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေမှကူညီနိုင်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာ ၁ ရက်တွင်မီချီဂန်ပြည်နယ်သည်လျှောက်ထားသူများအားအပန်းဖြေဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်စည်းမျဉ်းများနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးလျှောက်လွှာများကိုအွန်လိုင်းမှတင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဆေးခြောက်စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်ဥပဒေများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုသောလျှောက်ထားသူများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
မီချီဂန်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေ၏အဓိကအလုပ်သည်တရားရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမည်သို့ဖြတ်သန်းရမည်နှင့်တရားရေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုမည်သို့လျော့ချရမည်ကိုသင့်အားအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်နှင့် IRS သို့သင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့်လျှောက်လွှာအတွက်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်လိုအပ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရှေ့နေကောင်းတစ် ဦး ကအပြည့်အဝထောက်ခံလိမ့်မည်။
မီချီဂန်စည်းမျဉ်းဥပဒေအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်ပြည်နယ်တွင်လည်ပတ်လိုပါကအပန်းဖြေဆေးခြောက်နှင့်ဆေးခွဲရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အပန်းဖြေဆေးခြောက်တို့အကြားဓာတုဗေဒခြားနားချက်မရှိပါ။ သို့သော်သင်အပန်းဖြေဆေးခြောက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၁၀% ကောက်ခံသည့်အခွန်ကိုသင်ပေးရမည်။ ဤနည်းဖြင့်အပန်းဖြေဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သင့်လျော်သောဘဏ္supportာရေးအထောက်အပံ့များအရအနည်းငယ်ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဆေးခြောက်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကမီချီဂန်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေသည်သင့်အားနေရာများစွာတွင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင်လိုင်စင်အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
လိုင်စင်ရယူရန်စဉ်းစားသောအခါသင်သည်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာကိုပြင်ဆင်ရမည်။ မီချီဂန်ပြည်နယ်တွင်သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်စင် ၅ ခုကိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။ ဤအရာများသည်:
စိုက်ပျိုးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်သုံးတန်းအကြားစိုက်ပျိုးသူလိုင်စင်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည်။ သင်စိုက်ပျိုးနိုင်သောအပင်အရေအတွက်ကိုညွှန်ပြသည့်လိုင်စင် A၊ B နှင့် C အမျိုးအစားများရှိသည်။
Provisioning Centre သည်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ယာယီနေရာချထားရေးဌာနတစ်ခုရှိလိုပါကလုံခြုံစိတ်ချရသောလိုက်နာရမည့်အဆောက်အအုံသို့မဟုတ်လုံခြုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအနေဖြင့်မည်သည့်ဘဏ္financialာရေးအကျိုးစီးပွားမှသင်၌ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ၀ င်ငွေ၏ ၃% ထပ်ဆောင်းအခွန်ပမာဏကိုလည်းသင်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
Processor ဆိုသည်မှာစိုက်ပျိုးသူများထံမှဆေးခြောက်ကို သုံး၍ စားသုံးသူများ၊ ထုတ်ယူမှုနှင့်အခြားဆေးခြောက်ထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလိုက်နာမှုရှိသည့်စက်ရုံသည်ဆေးသိုလှောင်ရုံတွင် THC ပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးသည်၊ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ဓာတ်ခွဲခန်းသို့မဟုတ်ဆေးသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိထားသူကိုအလုပ်ခန့်အပ်ရမည်။
သင်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအတိအကျကိုပိုင်ဆိုင်ရမည်ဟုပြောသောတရားဝင်စည်းမျဉ်းများမရှိပါ။ လျှောက်ထားသူများစွာသည်သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစာချုပ်အရထားရှိကြပြီး၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားကြပြီး အကယ်၍ အတည်ပြုပါကထိုပစ္စည်းကိုဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်လျှောက်လွှာတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ငွေရေးကြေးရေးအရလုံခြုံမှုရှိစေရန်သင်အာမခံပါသည်။
မီချီဂန်၌ဆေးခြောက်ဆေးခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်သင့်တွင်ရှင်းလင်းသောနောက်ခံ၊ မစ်ရှီဂန်တွင်နေထိုင်သည့်သက်တမ်းနှင့်အရင်းအနှီးလုံလောက်စွာရှိရမည်။ သင်ဤ prequalification လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွန်ပြီးတာနဲ့သင်လိုင်စင်အရည်အချင်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်၏မွို့နယ်မွို့နယ်အတိအကျရှိဆေးခြောက်အဆောက်အအုံကိုခွင့်ပြုသည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာရှိမရှိသိရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏မြို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါကသင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်သောအဆောက်အအုံများကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
သင်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွန်ပြီးနောက်သင်သည်သင်၏လိုင်စင်လျှောက်လွှာသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်သင်၏စက်ရုံတည်နေရာအတိအကျကိုဖော်ပြရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သတင်းအချက်အလက်အတိအကျကိုသင်မပေးပါက MMFLA အရာရှိများကသင့်အားငြင်းပယ်ခံရနိုင်ခြေမြင့်မားသည်။
ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်၏မီချီဂန်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားလိုပါကသင်၏မြှို့နယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ လက်ျာမီချီဂန်ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှေ့နေကိုဆက်သွယ်ပါ။ အောင်မြင်သောဆေးခြောက်ဆေးခန်းစီးပွားရေးကိုဖွင့်လှစ်ရန်သင်သိထားသင့်သမျှကိုရှာဖွေပါ။
မီချီဂန်ရှိ Cannabis Business Attorney ကိုဆက်သွယ်ပါ
ထိပ်တန်းထစ် ဆေးခြောက်စီးပွားရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ စတင်တည်ထောင်သူများနှင့်တည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည် Cannabis စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အမှတ်အသားပြုသည်။ ငါတို့ ဆေးခြောက်ရှေ့နေချုပ်s ကိုပတျဝနျးကငျြဥပဒေများနှင့်စျေးကွက်ကိုသိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်အပန်းဖြေဆေးခြောက်အဖြစ် Hemp နှင့် CBD.
As ဆေးခြောက်ရှေ့နေများ သင်၏စတင်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဥပဒေရေးရာနှင့်စီးပွားရေးအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါမည် စက်ရုံကြီးထွားမှု၊ ယာယီနေရာချထားရေးဌာန၊ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ဆေးခြောက် microbusiness.
Scott Roberts သည် Law ကိုဆက်သွယ်ပါ
Scott အက်ဖ်ရောဘတ်ဥပဒေ, PLC
500 ဘုရားကျောင်းလမ်း, Suite 2M,
ဒက်ထရွိုက်, MI 48201
ဖုန်းနံပါတ်: (248) 234-4060